Izindawo zokudlela eziphuma phambili zokudla kwaselwandle ezingu-25 Eziseduze Kwami eMyrtle Beach nase-US
By UVictoria Akpan TMLT September 16, 2021 Ukudla, Izikhangibavakashi 0 Amazwana
- Izindawo zokudlela kwaselwandle eduze kwami -
Uma ukujabulela ukudla kwasolwandle, siyajabula ukubika ukuthi iMelika inikeza inqwaba yezindawo zokudlela zasolwandle ezizokwanelisa noma yikuphi ukufisa.
Noma ufuna amabha we-oyster athokomele ngensizakalo ehloniphekile noma izindawo zokudlela zasolwandle ezinomsindo ukudlala komculo bukhoma nomlando, bonke baphaka ukudla kwasolwandle okuhle kakhulu kanye nobuchwepheshe besifunda.
Lawa mabhizinisi awina imiklomelo akhonza izitsha zemfanzi zakudala, izintandokazi zesifunda, ngisho nezinto zemenyu yesitayela se-tavern. Izindawo zokudlela eziphezulu ezingama-25 zokudla kwasolwandle e-United States naseMyrtle Beach zibalwe ngezansi.
Izindawo zokudlela eziphuma phambili zokudlela kwaselwandle e-United States
1. Izindawo zokudlela zokudla kwasolwandle: Fiola Mare, Washington DC
UFabio Trabucchi UFiola Mare kuyisipho ekudleni okuhle okutholakala ngasogwini lwaseMedithera. Ukunambitheka kwezinhlanzi zasolwandle zase-Italiya kuchazwa imenyu eshintsha njalo esebenzisa ukusizakala kwemikhiqizo yonyaka.
Imenyu inemibala egqamile, ene izitsha ezilungiswe kahle zemifino emisha, ukudla kwasolwandle, nama-prime steak steaks, kanye namajusi aluhlaza okwemvelo, amaqebelengwane entekenteke, nophudingi abadumile.
Futhi, kubha okuphuzwayo okuphefumulelwe ukukhanya kolwandle nokucwengwa okulula. Amamenyu otshwala newayini ayekhethwe ngokugcizelelwa ukunambitheka kanye nokuqabuka, ngamathonya avela e-Italy namasiko aseMelika nakwamanye amazwe.
3050 K Street NW, Suite 101, Washington DC 20007, Ucingo: 202-525-1402
2. Ibha ye-Hogfish ne-Grill, i-Key West, i-FL
Ibha yeHogfish neGrill iyindawo yokudlela ephethwe endaweni eseFlorida Keys enikeza indawo yokudlela ebhishi ngendlela yakudala nokunambitheka kweKey West.
Ukukhethwa kwezikebhe eziya etafuleni kanye nepuleti elincane Okukhethekile kokudla kwasolwandle njenge-calamari ethosiwe futhi i-ceviche inikezwa kule hangout yendawo ehlehlisiwe.
Okukhethekile kompheki kufaka phakathi ama-conch fritters nezihlathi zeqembu, zombili izitsha ezidumile zaseFlorida.
Futhi, isidlo se-namesake sikhonzwa ngesinkwa esisha saseCuba noshizi waseSwitzerland, u-anyanisi, namakhowe, futhi sinokunambitheka okufana ne-scallops. Uhla lwama-taco wohlobo lwe-Baja oluhambisana nelayisi nobhontshisi kuzonelisa abalandeli be-taco.
6810 Front Street, Stock Island, FL 33040, Ucingo: 305-293-4041
3. 167 Raw, Charleston, eSouth Carolina
I-167 Raw eCharleston iyisiphephelo semakethe ye-oyster yokuqala yaseNantucket nemakethe yokudla kwasolwandle. Ama-oyster asendle akhishwa emanzini abandayo futhi asetshenziswe ngesitayela eseningizimu kule ndawo yokudlela enesizotha.
U-oyster ukhishwa kugobolondo lakhe ngokushunqa, futhi intuthu yomlilo ovulekile ithuthukisa ukunambitheka okunoshukela nosawoti. Okukhethekile kwasendaweni okubandakanya ama-lobster rolls, ama-tuna burger, nama-tacos ezinhlanzi ayatholakala nase-167 Raw.
Okusalungiswa kwasendaweni, kanye nokukhethwa kwewayini nama-champagne, ayatholakala kubha yokudlela.
Futhi, izivakashi zingahlala endaweni yokucwebezela emhlophe ekhazimulayo yezihlalo eziyi-12 noma kwelinye lamatafula womphakathi womabili, lapho izingxoxo ezinobungani zixubana nendawo efudumele.
193 King St, Charleston, SC 29401, Ucingo: 843-579-4997
4. Ibha yaseMatunuck Oyster, eNingizimu Kingston, RI
IMatunuck Oyster Bar ilayishwe ama-oysters amakhulu, amatshe e-cherry, ama-littlenecks, kanye nezimfanzi ezivela eRhode Island. Ama-oyster echibini lendawo yokudlela ahlanganiswe nemifino etafuleni etafuleni namakhambi.
Kodwa-ke, ukwenza izindlela zokupheka ezihamba phambili, kwenziwa ukunakekelwa okukhulu ngaphakathi ukulima ukudla kwasolwandle okusezingeni eliphakeme nemifino ephilayo. Ama-appetizers we-classic we-calamari asemenyu, kanye nesaladi eyodwa ye-quinoa crab isaladi enezinqathe kanye ne-vinaigrette kalamula.
Ukudla kwasolwandle kwasendaweni nemifino ephilayo evela epulazini labo kufakwa kumasobho, amasaladi, namas sandwich. UJambalaya uphekele ilayisi enkosini yase-Alaska imilenze yenkalankala kungukudla okuncane kwasolwandle okutholakalayo.
Izinhlobo ezahlukahlukene ze-steak, spaghetti, nezinkukhu ziqedela imenyu.
629 Succotash Road, South Kingstown, RI 02879, Ucingo: 401-783-4202
5. I-Angry Crab Shack, iMesa / Phoenix, e-Arizona
Njengoba kunezindawo eziyi-10 eziletha izitsha ezinkulu ze-cajun eSigodini seLanga, I-Angry Crab Shack eMesa, I-Arizona yisimangalo sokudla kwasolwandle sombuso esidume.
Ngokwengeziwe, imenyu yesidlo sasemini ifaka i-gumbo noma i-clam chowder, kanye nokukhethwa okuncane kwamasaladi amasha ahlanzekile.
Izihambeli zingenza isitsha ngendlela oyifisayo ngokukhetha inyama noma i-crispy tofu esosiwe futhi enongwe kusuka kokunye ukukhetha kokudla okusheshayo okugcwele ukunambitheka.
The imenyu yonke yesidlo sakusihlwa, efinyeleleka usuku lonke, iqala ngokukhetha okukhulu kokudla kwezilwandle. Amasangweji, izitsha zokudla kwasolwandle, kanye namabhasikidi akhethiwe akhethiwe anamafriji awo ahlukile ayatholakala.
2740 S Alma School Rd, Mesa AZ 85210, Ucingo: 480-730-2722
6. IBob's Clam Hut, iKittery, iMaine
Lokhu kungenye yezindawo zokudlela ezinhle kakhulu zasolwandle e-USA. IBob's Clam Hut ivulwe ngo-1956, kudala ngaphambi kokuba uRoute One abe yisifunda sokuthenga esinempilo namuhla.
Futhi, indawo yokudlela izinikele ekuqhubekeni nokuhlinzeka izinhlanzi ezithosiwe ezijwayelekile ngesitayela sendabuko esiqondile izakhamizi zaseMaine ezikhule zikulindele.
Usuku ngalunye, izimbaza zikaBob zilethwa zintsha ukuze kuqinisekiswe ukuthi ikhwalithi ephezulu kakhulu yokudla kwasolwandle okukhethwe ngesandla. Izinto zemenyu ezinjenge-lobster stew kanye nama-clams othosiwe wesiginesha asalungiswa kusetshenziswa izindlela zokupheka zangempela zikaBob.
UBob's Clam Hut uzibophezele ekuphathweni kwemvelo, esebenzisa amandla elanga ngokuphelele futhi esebenzisa izinto ezibolayo kanye nezinye izindlela zepulasitiki.
315 US-1, Kittery, ME 03904, Ucingo: 207-439-4233
7. Izindawo zokudlela zokudla kwasolwandle: i-Red Fish Grill, eNew Orleans, LA
Izinhlanzi ezintsha nezinhlanzi zasolwandle ziyakhonzwa eRed Fish Grill, etholakala endaweni yokuqala eseBourbon Street. Ama-diners angahlala endaweni enkulu ye-oyster ne-cocktail bar, equkethe izindonga zezitini ezingenalutho ngemidwebo yokuphila yasolwandle.
Izithako ezintsha zepulazi nokubanjwa komdobi wasendaweni kujwayele dala ukudla okwehlukile njengama-bbq oysters, i-redfish eyosiwe ye-hickory, ne-gumbo yokudla kwasolwandle nge-alligator sausage.
I-red Fish Grill's pudding isinkwa sikashokoledi esiphundu ukuphela okuphelele kunoma yisiphi isidlo sakusihlwa. Amasobho, amasaladi, namaswishi kuyatholakala ngesidlo sasemini, kanti imenyu yakusihlwa inezinhlobo eziningi zezinhlanzi zaseGulf nezimfanzi.
115 Bourbon St, New Orleans, LA 70130, Ucingo: 504-598-1200
8.Le Bernardin, eNew York, NY
Lokhu kungenye yezindawo zokudlela ezinhle kakhulu zasolwandle e-USA. UMaguy noGilbert LeCoze basungula iLe Bernardin eParis, futhi impumelelo yokudlela ngokushesha yaholela ekwandisweni kwayo eNew York.
Ubulula bokuletha nje inhlanzi entsha eselungiswe ngenhlonipho kugcizelela umgomo wokuthi kwasolwandle kufanele kube yisikhungo sokunakwa.
Futhi, izivakashi zingakhetha kusuka ezinhlobonhlobo ze-Chef Tastings, nge-pairings yewayini noma ngaphandle kwayo, izidlo zasemini ezi-3, kanye nezidlo zamakhosi ezi-4 kumenyu.
Ngokwengeziwe, okunikelwe kule ndawo yokudlela kwandiswa ngo-2014 ngokufakwa kwendawo yomcimbi eyinkimbinkimbi yemicimbi ekhethekile nemibuthano yezinkampani.
Baphinde bavula ibha yewayini esezingeni eliphakeme enemenyu elula nezikhalazo ezabiwayo zokuhamba nohlu lwewayini olukhulayo.
155 W 51st St, New York, NY 10019, Ucingo: 212-554-1515
9.Cood's Seafood, Inglewood, CA
Ukudla kwasolwandle kukaConi kulungisa ukudla kwasolwandle okwenziwe ngesitayela saseNayarit okuyiqiniso ngezithako ezintsha ezisuka eMexico.
Futhi, i-Seafood yaseConi ibilokhu ihlinzeka ngezibiliboco ezithola imiklomelo endaweni yase-Inglewood iminyaka engaphezu kwengu-30, iqala engadini yayo bese idlulisela ingubo endodakazini yayo.
Imenyu iqala ngama-ceviche appetizers futhi okunye okudala kwasolwandle kwamapuleti amancane njenge-campechana nama-marlin tacos.
Ukudla kwabo kwezimfanzi kuza ngezindlela ezahlukahlukene zokunambitheka, kufaka phakathi igalikhi yebhotela, okubomvu okushisayo, nejalapeno enoshizi nokhilimu omuncu. I-lemonade esanda kufinywa kanye nokukhethwa kwamabhiya aseMexico kuphakathi kweziphuzo ezitholakalayo.
3544 West Imperial Highway, Inglewood, CA 90303, Ucingo: 310-672-2339
10. Izindawo zokudlela zokudla kwasolwandle: Mama's Fish House, Paia, HI
UFloyd noDoris Christenson bahamba eSouth Pacific iminyaka emine befuna indlu eyisiqhingi yokugcina, kanti iphupho labo lifezeka.
Phakathi kolwandle olwandle lukaMaui, umndeni osemusha waqala indawo yokudlela yezinhlanzi entsha ngo-1973. UMama's Fish House ubelokhu ephakela ukudla okwenziwe ngesitayela sasePolynesia okukhiqizwa kusukela kubadobi bendawo abadotshwa nsuku zonke kusukela ekuqaleni.
ITropical Ono, iMahi-Mahi enemibala emihle, kanye nabahlala emadwaleni anjengeLehi, Uku, ne-Onaga baphakathi kwezinhlanzi ezingeniswa nsuku zonke. Imenyu yansuku zonke isabandakanya ukubanjwa okusha kwabadobi bendawo, okulungiselelwe ngendlela yothando efanayo noMama.
799 Poho Place, Paia, HI 96779, Ucingo: 808-579-8488
Ukudla kwasolwandle kwaseChihuahua kwaqala njenge ukusekelwa okuncane kokudla komndeni okwakhonza i-ceviche, ukudla kwasolwandle, nama-cocktails eduze kwetafula lezithelo elidumile eNogales, eMexico.
Izwi lemenyu yakhe emnandi lasakazeka ngokushesha phakathi kwabantu futhi ekugcineni laba yindawo yokudlela ephelele.
Lapho ingxenye yomndeni ithuthela e-Arizona, wenza noMariscos Chihuahua. Izizukulwane kamuva, umndeni usakhonza izindlela zokupheka zendabuko ezenziwa zaduma eminyakeni engaba ngu-50 eyedlule, kufaka phakathi i-ceviche, izimfanzi zasolwandle ngejusi likalamula, futhi zaphonswa notamatisi, u-anyanisi, ukhukhamba nama-condiments.
Futhi, imenyu yesidlo sakusihlwa inikeza izinhlobonhlobo zezinhlanzi, izinhlanzi, nezinkukhu ezikhethwe ngesaladi, irayisi, kanye namathanga
1009 N Grande Ave, Tucson, AZ 85745, Ucingo: 520-623-3563
12. I-Safe Harbor Seafood Market & Indawo yokudlela, eMayport, FL
I-Safe Harbor Seafood Market & Indawo yokudlela yaziwa njengezinhlanzi zasolwandle ezihamba phambili endaweni yaseJacksonville ebanjwa nsuku zonke futhi elungiselelwe esimweni esingahlelekile. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-25 imakethe ithengise izinhlanzi ezintsha nezinhlanzi zasendaweni emiphakathini yase-Atlantic.
Indawo yokudlela yavela ngo-2013 iphakela izintandokazi zaseFlorida, iphekwe uku-oda ngokubukwa kwamanzi okuhle ukubona ukuthi izikebhe zivela ekudobeni.
Ngokwengeziwe, imenyu inikeza ukudla okulula njengolayini we-gator kanye ne-shrimp nachos nokukhethwa okubanzi kwamabhasikidi okudlela anikezwa ngamazambane othosiwe, iklabishi nokuthulisa imidlwane. Isobho, amasaladi, ama-tacos, namaswishi atholakalayo anikeza ukunambitheka nesitayela esiningi.
4378 Ocean Street # 3, Mayport, FL 32233, Ucingo: 904-246-4911
13. IPacific Beach Fish Shop, eSan Diego, CA
IPacific Beach Fish Shop yaqala ukuvula iminyango yayo ngo-2010 ngokubanjwa okusha kosuku. Amakhasimende angakhetha ezinhlobonhlobo zezinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle kumenyu yokwakha owakho.
Bese ukhetha i-marinade nenketho yesethulo, njengama-tacos abiwe noma othosiwe, amasaladi, ama-sandwich, noma amapuleti edina.
I-Fish Shop Favorites ifaka i-Pineapple Express taco kanye ne-Poké Bowl, eyenziwe nge-Ahi eluhlaza engagciniwe efakwe kusosi wesoyi, enongwe ngojinja nopelepele obomvu ochotshoziwe, ogcotshwe i-Sriracha aioli ne-avocado lime drizzle futhi isetshenziswe ngaphezulu kwelayisi le-jasmine ngamakhukhamba nama-wonton .
1775 Garnet Ave, 92109 San Diego, Ucingo: 858-483-1008
14. I-Providence, eLos Angeles, CA
Lokhu kungenye yezindawo zokudlela ezinhle kakhulu zasolwandle e-USA. I-Providence iletha ukudla kwasolwandle okuhle kakhulu kwasendaweni, okulungiselelwe umpheki owaziwayo ngenhlawulo nenhlonipho.
Kodwa-ke, ukugcina ikhwalithi enhle kakhulu yezizukulwane ezizayo, uChef Cimerusti ugcizelela ekusebenziseni ukubanjwa kwasendle kuphela, ukudla kwasolwandle okusimeme nezinhlanzi ezivela emanzini aseMelika.
Imenyu yesidlo sasemini inezinto zakudala ezinjengama-oysters engxenyeni yegobolondo nama-clam fritters, kanye nokufakwa okubandakanya iVermilion Rockfish kanye nemenyu yokunambitha izifundo ezine.
Futhi, i-buffet yokudla kwakusihlwa iqala ngezibiliboco ezifana ne-caviar ekhuliswe epulazini nama-truffle amhlophe ase-Italy akhonzwa nge-pasta, i-risotto, noma i-omelet. I-Providence inikezela ngamamenyu wokunambitha amathathu noma ngaphandle kwama-pairings ewayini kusihlwa.
5955 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90038, Ucingo: 323-460-4170
15. IPêche Seafood Grill, eNew Orleans, LA
Abapheki uDonald Link, uStephen Stryjewski, noRyan Prewitt bakha iPêche Seafood Grill ngamathonya avela eNingizimu Melika, eSpain naseGulf Coast.
Imenyu ifaka ukudla kwasolwandle okudala kanye nezindlela zokupheka zakudala eziphekwe eziko elivulekile kusetshenziswa izinhlanzi zasendaweni ezintsha kanye nempahla yokulima esimeme.
Ibha eluhlaza enesaladi lokudla kwasolwandle nezinzipho zenkalankala, amapuleti amancane nama-nibble okuqala, amasobho namasaladi angenawo amapulazi, kanye nezidlo zasemini nge-Louisianna catfish neGulf shrimp ezinye zezinketho zokudlela.
I-Link Stryjewski Foundation, ehlose “ukusiza ukondla, ukufundisa, nokunika amandla intsha yaseNew Orleans,” iyindawo yokudlela ethole izindondo ebuyisela emphakathini.
800 Magazine St, New Orleans, LA 70130, Ucingo: 504-522-1744
Izindawo zokudlela eziphuma phambili zokudlela kwaselwandle e-Myrtle Beach
Qhubeka ufunde ukuze ufunde mayelana nezinye izindawo zokudlela zasolwandle eMyrtle Beach.
1. Indawo yokudlela yaseCaptain George's Seafood
Lesi ngesinye sezindawo zokudlela ezihamba phambili zokudla kwasolwandle eMyrtle beach. Indawo yokudlela yaseCaptain George's Seafood ingenye yezindawo zokudlela zasolwandle eziyishumi nambili eziphezulu zaseMelika, okuthembisa injabulo nokugcoba isisu konke ngasikhathi sinye.
UCaptain George uyintokozo kuzo zonke izinzwa, ngokuma kwayo okuhle, inhlonipho, nokudla okuconsisa amathe umlomo, okutholakala nje ukuphonswa ngetshe kusuka eBroadway olwandle.
AmaBuffets eFirst Catch anenani elifanele, futhi imindeni izokujabulela ukukuzwa lokho izingane ezingaphansi kweminyaka emine dine mahhala lapho kuthengwa i-buffet yabantu abadala.
Amaqembu amakhulu angahlaliswa kalula endaweni yokudlela uma kwenziwa amalungiselelo wangaphambilini.
Kutholakala ku: 1401 29th Avenue, North Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-916-2278
2. Ama-Rockefellers Raw Bar
KuRockefellers Raw Bar, uzothola noma yini oyifunayo. IRockefeller Raw Bar, etholakala eNorth Myrtle Beach, izinikele ekupheleleni, njengoba kufakazelwa wumsebenzi omuhle kakhulu wabasebenzi kanye nepuleti ngalinye elithandekayo eliphuma ekhishini.
Futhi, Indawo yokudlela iphaka i-tuna, i-lobster, izimbaza, ama-oysters, ama-scallops, ne-crawfish, kanye namaketela omphunga adume kabi, okushisa izinhlanzi zasolwandle ezishisayo abilisiwe ngokukhetha kwakho amasoso futhi amnandi ngendlela emangalisayo.
Isimo seRockefellers Raw Bar siyajabulisa ngokufana, izidlo zanxuswa ukuba zihlale phansi ziziphumulele kwesinye sezihlalo zikakaputeni zikanokusho ngenkathi umthengisi webhari elungisa iziphuzo nekhishi liqala ukusebenza.
Kutholakala ku: 3613 Highway 17 South, North Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-361-9677
3. Ibha ne-Grill kaDon Don Engcolile
Ibha ne-Grill kaDon Don Engcolile iyindawo yokudlela yaseKey West enezindawo ezimbili eMyrtle Beach, enye eceleni kwendlela yokuhamba kanti enye isenhliziyweni yeMyrtle Beach. Ikhonza konke kusuka kumaphiko ashisayo kuya kuma-oysters amasha kugobolondo lesigamu.
Abantu bendawo kanye nezivakashi baye kwaDirty Don's ukuyosampula ukudla abakudlayo, ikakhulukazi iDunkin 'Pot eyaziwayo, enqwabelene kakhulu nezimbaza ezinesitimu, ummbila ku-cob, amasoseji agobhozayo nesinkwa sikagalikhi.
Ukudla kuhle kakhulu kungakhathalekile yonke indawo ovakashela kuyo, futhi indawo yokudlela ithole isitifiketi sobuhle ku-TripAdvisor. Isonto lonke, ungaphuthelwa ihora labo lokujabula kanye nama-oyster roast!
Kutholakala ku: 408 21st Avenue North nase910 North Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-448-4881
4. IBuffet Yasolwandle Yakwa Preston
I-Buffet yasolwandle yasePreston kufezeka iphupho lomthandi wezilwandle. Indawo yokudlela iyindlela yokudla esabekayo kubantu bendawo nabahambi, ngokudla okumnandi, enye yezinsizakalo ezihamba phambili endaweni, kanye nomoya owamukelekayo.
I-buffet enkulu inezinhlanzi ezithandekayo nenyama yenkomo enamanzi, kanye nezinhlangothi ezihlwabusayo njengemifino enomsoco kanye nemiqulu yesinkwa esanda kubhakwa.
Ibha enkulu yesaladi kaPreston, enezinhlamvu eziyi-15 zemifino emnandi, izithelo ezimibalabala, ukugqokwa okuningi, kanye nezibiliboco ezifana nesaladi le-shrimp ne-shellfish, isaladi le-pasta, nezimfanzi ezibandayo eziphekiwe, kungenye yezindawo zokudlela eziyinhloko.
Izingane ezineminyaka engaphansi kwemithathu zidla mahhala endaweni yokucima ukoma yezingane.
Kutholakala ku: 4530 Highway 17 South, North Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-272-3338
5. I-Seafood World Buffet
Lesi ngesinye sezindawo zokudlela ezihamba phambili zokudla kwasolwandle eMyrtle beach. E-Seafood World Buffet, bonke abavakashi bazothola isidlo sakusihlwa esifanelekile. I-Seafood World yaziwa ngokudla kwasolwandle okusha, ama-steaks aphezulu, kanye nomkhiqizo omuhle kakhulu ongasendaweni.
Konke okushiya ikhishi kuthathwa njengomsebenzi wobuciko, futhi konke okuhlangenwe nakho kokudla kuthathwa njengomkhosi.
Jabulela ama-steaks amnandi aboshwe ekupheleleni noma ukudla kwasolwandle okuthandekayo okulungiselelwe ngezindlela ezahlukahlukene. Akungabazeki ukuthi ngezinto ezingaphezu kwekhulu ku-buffet, konke ukuthanda ukudla kuzohlangatshezwa.
Uma i-diner ingazizwa idla ku-buffet, i-Seafood World's a la carte imenyu iyamangalisa.
Qala ngemilenze yenkalankala yamakhilogremu-for-pound, ama-kabobs okudla kwasolwandle, noma ama-classics afana ne-lobster platter, i-World's Seafood Platter, noma i-shrimp scampi.
Kutholakala ku: 411 North Kings Highway, Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-626-7896
6. Indlu yaseChesapeake
Indlu yaseChesapeake ubelokhu enikezela ngokudla kwasolwandle okuhle kakhulu kwasendaweni kanye nama-USDA steaks iminyaka engaphezu kwengu-40, futhi bekungumnikazi womndeni kusukela ngo-1971.
Indawo yokudlela yanele ukugcina amakhasimende ebuya yedwa, ngokubukwa okuhle kwasemanzini okuzothokozisa wonke umuntu.
Ukuze uthole isidlo sakusihlwa esimnandi, zama isitshulu senhlanzi esidumile sikaMalume uBill, futhi ungakhohlwa uku-oda isaladi eseceleni ukuze usampule okokugqoka okwenziwe ngesaladi okudliwayo.
Ungakhohlwa ukuqeda ukudla kwakho ngemiqulu embalwa yesinamoni eyaziwayo yaseChesapeake House, ebhakwa nsuku zonke ebhikawozi.
Kutholakala ku: Ucingo: 843-449-3231, 9918 Highway 17 North, Myrtle Beach, South Carolina
7. Ibha ye-Oyster Bar ne-Seafood Cafe yaseBimini
Uma kuziwa Ibha ne-Café yeByster's Bimini, azikho izinsuku ezimbi. AmaBimini, aqala ukuvula iminyango yawo ngo-1985, ubelokhu eletha ukunambitheka nokuzizwa kweziqhingi eMyrtle Beach cishe iminyaka engama-30 ngokukhethwa kokudla kwasolwandle okusha kakhulu nezinhlanzi esifundazweni.
Izivakashi zingalindela insizakalo evelele kubasebenzi abathandekayo, kanye nendawo yokudlela enhle, imenyu yokuphuza ebanzi, nomculo obukhoma odonsa umdanso.
Khetha okukhethekile okufana nebhodwe le-steam, elibandakanya uhhafu wama-oysters, ama-clams, kanye nezimbaza, kanye nekhilogremu lesine lemfucumfucu ebabazekayo, iphawundi yemilenze yokuphamba, nommbila kusikhwebu kulo lonke ulwazi lukaBimini.
Thatha uhambo oluya ezweni esiqhingini saseBimini bese udla ezinye zezinhlanzi zasolwandle ezinkulu kunazo zonke esiqhingini saseBimini.
Kutholakala ku: 930 Lake Arrowhead Rd, Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-449-5549
8. Indawo yokudlela iPier 14 neLounge
Lesi ngesinye sezindawo zokudlela ezihamba phambili zokudla kwasolwandle eMyrtle beach. Indawo yokudlela yasePier 14 neLounge ziye zaba ukuphaka ukudla okumnandi kakhulu kolunye lwezimpophoma zamanzi ezigqame kakhulu eMyrtle Beach kusukela ngo-1985, nge-sea vista emangalisayo, ukushaya i-surf, nokushona kwelanga okuwisa umhlathi.
IPier 14 ngekaBryan Devereux futhi uyaziqhenya ngokuba nesipiliyoni sokudla esiwuhlobo oluhlukanisa nezinye izindawo zokudlela ezisendaweni.
Abavakashi kule ndawo yokudlela ukuze badle isidlo sasemini bangasampula isemishi elikhulu lenhlanzi noma isangweji lekhekhe, kanti izivakashi zakusihlwa kufanele zikhethe i-chicken crustacean, i-scallop platter, noma i-flounder plate.
Izivakashi nazo zingazama isandla sazo ekudobeni i-pier phakathi nenkathi, njengoba indawo yokudlela inesithiyelo nokubamba isitolo ngemuva.
Kutholakala ku: 1306 North Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-448-6500
9. 21 Main eNorth Beach
21 Main eNorth Beach ingumkhiqizo weminyaka engaphezu kwengama-25 yesipiliyoni nentshisekelo yezindawo zokudla ezivelele nezindawo ezinhle futhi iphethwe futhi iqhutshwa ngabakwaLovin 'Oven Caterer, abadla ukudla abadumile eLong Island naseManhattan.
Futhi, imenyu eyi-21 Main iqukethe inyama enezinsuku ezingama-28 zomile kanye nokudla kwasolwandle okuhle kakhulu nokusha okutholakala eMyrtle Beach. Indawo yokudlela yaziwa ngokuhlinzeka nge-sushi enkulu kunazo zonke eGrand Strand.
Ukuvakashela e-21 Main eNorth Beach kunikela ngesipiliyoni sokudlela esivelele, ngama-honours amaningi ngaphansi kwebhande labo nokuhlonipha okunamandla izithako kanye necuisine abayenzayo.
Zama ipuleti lamanzi abandayo namakhekhe e-salmon njengezikhalazo, kanye nezibiliboco zaseNingizimu kanye ne-sushi enhle kakhulu kwimenyu yezifundo eziphambili.
Kutholakala ku: 719 North Beach Boulevard, North Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-315-3000
10. UNkk Fish Seafood Grill
Lesi ngesinye sezindawo zokudlela ezihamba phambili zokudla kwasolwandle eMyrtle beach. Inhloso kaNkk Fish ukwenza zonke izimenywa zizizwe njengendawo lapho ziphuma endaweni yokudlela, futhi lokhu ukufeza ngokugcina izinto zingajwayelekile. Ungavumeli ukukhohliswa amapuleti wephepha nokuntuleka kwe-silverware enhle.
Abapheki bakaNkk Fish abagqamile bayakwazi ukugxila ekuqinisekiseni ukuthi kuphela izinhlanzi ezimnandi kakhulu nezintsha kunazo zonke ezinikezwa isivakashi ngasinye esikhathazekile ngoba bakhethe ukungagxili ezindaweni ezihehayo.
UNkk Fish uthenga okwasendaweni ngangokunokwenzeka ukugcina izinto zinengqondo, okunezela nje ekudleni okuhle nasekwamukeleni imvelo yomndeni yendawo yokudlela.
Ukuvakasha okukodwa kuphela okudingekayo ukuze ubanjwe, futhi izivakashi azilambi.
Kutholakala ku: 919 Broadway Avenue, Myrtle Beach, South Carolina, Ucingo: 843-946-6869
Siyethemba ukuthi uyithande le ndatshana nokuthi ibisizakala kakhulu kuwe. Uma unemibuzo noma iziphakamiso, sicela wenze kahle ngokushiya amazwana futhi, wabelane ngale ndatshana nabangani bakho.
Tags:amadolobha amahle kakhulu okudla kwasolwandle eMelika, amadolobha amahle kakhulu okudla kwasolwandle emhlabeni, ukudla kwasolwandle okuhle kakhulu emhlabeni, indawo yokudlela ehamba phambili yokudla kwasolwandle e-los angeles, izindawo zokudlela ezinhle kakhulu zasolwandle e-florida, izindawo zokudlela ezihamba phambili zokudla kwasolwandle e-nyc, izindawo zokudlela ezinhle kakhulu zasolwandle emhlabeni, izindawo zokudlela ezinhle kakhulu zasolwandle eduze kwami
Ukubuka konke kwe-Delta SkyMiles nemivuzo ye-2021
Imibono Engcono Kakhulu Yasemini Yezingane Nezindawo zokudlela Ezinobungani e-San Antonio
Izindawo zokudlela zothando ezingama-30 zase-Istanbul Eziseduze Nawe Ngokubukwa Okumangalisa Kakhulu
Izingubo Zokujima Ezinhle Kakhulu Zabesilisa kanye Nemikhiqizo Yezingubo Ezigqoka Ezisebenzayo Ehamba Phambili